ရှညောသား: July 2015
ဒါပေမဲ့အခုရက်ပိုင်း shopping mall ရောက်တော့မှိုတစ်ထုပ်ကိုကန်စွန်းရွက်ဈေးနဲ့တွက်ရင်သုံးစည်းစာ
လောက်ပဲရှိလို့ဝယ်ပြီးတွဲပေးလိုက်တယ်ဗျာ။သူတို့လည်းအဆင်ပြေကိုယ်လည်းဗိုက်ဝပေါ့ :) ကြော်နည်း
ဖ ဦးထုပ် တွေကတော့မှိုနဲ့ကန်စွန်းရွက်ကိုတွဲစားတာမတွေ့မိဘူး။ ကန်စွန်းရွက်ဆိုငါးနဲ့မဟုတ်ရင်ဝက်သား
နဲ့ အချဉ်ရည်ချက်တာများတယ်။သူတို့ခေါ်တာတော့ (ဆီနီဂန်)တဲ့ ပဲသီး၊ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ရောပြီးအရည် သောက်ပေါ့။အသားစားတာများတဲ့သူတို့လူမျိုးတွေယောကျာ်းမိန်းမဗိုက်တွေပူနေတာကမြင်တာနဲ့ ဖ ဦးထုပ်မှန်းသိတယ်။မီးခိုးတိုက်တဲ့အကင်တွေဝက်သားကြက်သားကြက်ခေါင်း၊အသည်းအမြစ်၊၀က်ခေါက်
စာရေးသူ ရှညောသား at Friday, July 24, 2015 1 comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, July 18, 20152comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဘလော့ထဲဝင်ဖတ်ပြီးဆဲရင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူး :) အကြော်တွေကြော်ပြီးလို့စားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်မှ
စာရေးသူ ရှညောသား at Wednesday, July 15, 20152comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ကိုမျက်လုံးထဲပြေးမြင်မိရာကဒီပို့စ်လေးရေးတင်ဖို့စဉ်းစားမိတာပါ။ပုပ္ပားနဲ့ပုဂံညောင်ဦးဘုရားဖူးရောက်ဖူးတဲ့ သူတော်တော်များလက်ပံပျားကြက်ကြော်ကိုသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။မိတ္ထီလာကျောက်ပန်းတောင်းလမ်းပေါ် မှာရှိတဲ့ကားလမ်းဘေးရွာကြီးတစ်ရွာပေါ့။ကျနော်ကျောင်းတက်တုန်းကဆိုထမင်းဆိုင်တွေနဲ့ခရီးသည်တင်
ငါ့ပေါင်လုပ်တော့ဝယ်တဲ့သူကကြက်ပေါင်လားလူပေါင်လားမကွဲတော့ဘူးလေ :) ရင်အုပ်ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ
စာရေးသူ ရှညောသား at Saturday, July 11, 20152comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook
ဒါနဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့အမေ့ကိုအကျိုးအကြောင်းပြောပြဖြစ်တယ်။အမေကတော့ဘာမှသိပ်မထူးဆန်းသလိုနဲ့သာမာန်ပဲဖြေပါတယ်။အိမ်အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိနေတဲ့အတွက်လည်းအဖြူအစိမ်းအသစ် ၀ယ်ပေးဖို့မပြောရဲပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာအစ်ကိုကြီးကတခြားရွာမှာပဉ္စမတန်းဆက်တက်နေပါပြီ။သူ့မှာတော့ ကျောင်းစိမ်းလုံချည်နဲ့အဖြူတစ်ထည်ရှိပါတယ်။သူကလည်းဒီတစ်စုံနဲ့ပဲကျောင်းတက်နေရတာဆိုတော့သူ့ ဆီကငှားလို့လည်းအဆင်မပြေနိုင်ပါဘူး။နောက်ဆုံးတော့ကျနော်တို့ညီအစ်ကိုတစ်တွေရဲ့အ၀တ်တွေထည့်
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငယ်ငယ်တုန်းကကြုံခဲ့ရတာတွေဟာကျနော့်ဘ၀အတွက်တော့အမှတ်ရစရာသတိရစရာတွေ ချည်းပါပဲဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်လည်းအခုလက်ရှိအခြေအနေမှာတခုခုကြုံလာရပြီဆိုရင်ငယ်ငယ်ကကြုံခဲ့ရတာ တွေနဲ့ယှဉ်ပြီးပြန်ပြန်စဉ်းစားတယ်။တချို့ကတော့ထင်တတ်ကြတယ်ငယ်ငယ်ကချို့ချို့တဲ့တဲ့နေပြီးဘ၀ကို ရုန်းကန်ရင်းကြိုးစားလာတဲ့သူတွေဟာအရွယ်ရောက်လာလို့အတော်အသင့်အဆင်ပြေလာတဲ့အခါကိုယ် လာရာလမ်းကိုမေ့တတ်ကြတယ်။ရွာကနေထွက်ပြီးရွာပြန်လာတဲ့အခါမတူသလိုမတန်သလိုဆက်ဆံကြတာ ကိုလည်းကြုံဖူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျနော်ကတော့အဲ့လိုစိတ်မျိုးလုံးဝမထားပါဘူး။ကိုယ်ဆင်းရဲခဲ့ရတာကိုပဲဂုဏ်တခုအနေနဲ့ကျနော်တန်းဖိုးထားတယ်။မြို့မှာနေရင်တော့မြို့သားပေါ့ဒါပေမဲ့တောပြန်ရောက်တဲ့အခါ
အဖြစ်ကလေးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါကိုယ့်လာခဲ့လမ်းကိုပြန်ပြောင်းသတိရရင်းမှတ်တမ်းလေးတွေအ နေနဲ့ကျန်ခဲ့စေချင်တာကြောင့်ပါ။ဘယ်နေရာကိုပဲရောက်ရောက်ကျနော်ဟာတောသားတစ်ယောက်ဖြစ် တယ်ဆိုတာကိုဂုဏ်ယူစွာနဲ့ခေါင်းမော့ပြီးပြောတတ်ပါတယ်။အဖေနဲ့အမေဈေးရောင်းရှာကျွေးပြီးကျောင်း
စာရေးသူ ရှညောသား at Thursday, July 02, 20152comments Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook